Xulalka England iyo Spain oo Ka Xir xirtay Euro 2016 ee France Halka Iceland Iyo Italy ay Siwayn U dabaal dageen+Sawiro | Warbaahinta Umada Soomaaliyeed	Sunday, April 23rd, 2017	Home
Xulalka England iyo Spain oo Ka Xir xirtay Euro 2016 ee France Halka Iceland Iyo Italy ay Siwayn U dabaal dageen+Sawiro
Jun 28, 2016 - jawaab	Xulka Qaranka Iceland oo Kan England ka reebay tartanka Euro 2016 ka dib markii ay 2-1 ku garaaceen iyagoo u soo baxay wareega 8da ee tartanka qaramada Yurub iyagoo wareega xiga la ciyaari doona France waana markii ugu horeysay abid ee ay Iceland ka qeyb qaadato tartanka Yurub waxaana ay durbaba marayaan wareega 8da.
Kabtanka Qaranka England ayaa u saxiixay rigoorada ingiriiska waxaana durbadiiba ka daba yimi oo la wareegay hogaaminta Ciyaarta Xulka Iceland oo isagu cashar lama ilaawaan ah u dhigay kan England.
Iceland waa Jaziirad yar oo aan horey tartamada yurub aan oga qayb qaadan balse waxaa ay lasoo baxeen khibrad ciyaareed oo aan laga maleysanayn .
Qaranka Iceland ayaa waxaa labada gool u kala dhaliyay Ragnar Sigurdsson iyo Kolbeinn Sigthorsson iyagoo ugu danbeytiina kula dabaal dagay Jamaahiirtooda Allianz Riviera stdium.
Sidoo kale Xulka Talyaaniga ayaa iska xaadiriyay wareega 8da ee Euro 2016 ka dib markii ay meesha ka saareen xulka Spain iyagoo 2-0 ku garaacay xulkii difaacanayay koobkaan ee La Roja.
Goolal ay dhaliyeen Chiellini iyo Pelle ayaa ugu filnaa Italy inay kaga talaabsato xulka Spain iyagoo wareega 8da ku balansan xulka Jarmalka.
Jarmalka ayaa xalayto si raaxo leh kaga soo gudbay xulka Slovakia iyagoo 3-0 ku soo dubtay, waxaana ay haatan wajihi doonaan xulka Azzurri oo kalsooni badan qaba ka dib guushii weyneyd ee ay ka gaareen xulka Spain.
Sidoo kale Copa America ayaa soo gaba gabooway waxaana Sanadkii labaad oo xariir ah la hoyday Xulka qaranka Chile oo ay rogoora yaal isla gaareen kan Arjentina.
Arjentina ayaa wacdaro dhigaysay inta uu socday koobkaan waxaana sanadkaan ay u miciya lisanaysay inay qaadaan koobkaan madama 4 mar oo isku xiga ay final uun ay ku hungoobayeen.
Si kastaba Chile ayaa jilbaha u dhigtay Arjentina waxaana si wanaaagsan ay kubada ola qaybsadeen xulka Qaranka Arjentina iyagoo kaarka Cas laga siiyay Laacibka u dheela Naadiga Basel ee Diaz.
Sidoo kale Arjentina ayaa waxaa iyaguna ka qaatay kaarka cas Laacibka reer Man united ee Rojo kadib markii uu is adag u galay Arturo Vidal.
Kahor ciyaarta ayaa waxaa hadlay laacibkoodii hore ee Maradona marna usoo noqday qaranka Tababare waxaana uu sheegay in Hadii Arjentin ay qaadi waydo koobkaan ay ku haboon tahay inaysan dib isugu imaan Tartamada Caalamiga ah .
Arintaasi ayaa saxaafada ka hadashay waxaana Durbadiisa ku dhawaaqay Laacibka reer Barce ee Lionel Messi inuusan u safan doonin Xulka Qaranka Arjentina oo uu isaga Fariinsan doono Ciyaaraha Qaramada waxaana sidoo kale ku Raacay oo isna Si aan Rasmi ahayn u Sheegay Kun Agüerro inuu isaga Hari doono Qaranka Arjentina.
Arintaasi ayaa waxay ku Noqonaysaa Arjentin Dhabar jab wayn waxaana dhowaan la filayaa inuu Qabsoomo Shir ay isugu Imaan doonan Masuuliyiinka Xirirka Kubada Cagta ee Arjentina.
Shirkaas ayaa waxaa looga Tashan doonaa sidii loo daba qaban lahaa Qaranka sii Niyad xumaanaya waxaana dhiiri galin loo sameen doonaa Xidigaha doonaya inay isaga hayaamaan Xulka Qaranka Arjentina.
Sidoo Kale Garsoorihii hayay Ciyaarta Final ahayd ayaa waxaa Eedayn u soo jeediyay Xariirka kubada Cagta ee Qaranka Arjentina waxaana ay sheegeen inay Garsooraha Ciyaarta ka waynaatay oo uu Xakamayn waayay.
ugu Danbeyntii ayaa waxaa Copa America u dabaal dagay Xulka Qaranka Chile halka Arjentina ay oohin uun la Hoyatay.